Nhau - Iripi mota, iripi Rayone
Imota iripi, Rayone aripi
Mumakore matanhatu, mavhiri aRayone akachinja kubva pamukomana asingazive kuenda kune wechidiki ane mweya wakasimba, uye ngatikurei kubva pane lagard isina mukurumbira kune munhu ane mukurumbira muindasitiri yemavhiri, uye muridzi achiri kupokana neKushinga kwakasimba.
Musi waZvita 15, 2014, vhiri rekutanga reRayone rakazvarwa. Hwekutanga "hupenyu hushoma" hwakanga hunotakura mweya wekuzvarwa kwaRayone wakaberekerwa muPark Industrial Park yeYihuang County, Fuzhou City, Jiangxi Province. Kunyangwe hunyanzvi panguva iyoyo hwakanga husati hwakura zvishoma, Iyo michina haina kumbomira zvakakwana, uye isu hatina kutumidzwa mazita muindasitiri yemavhiri, asi isu takanga tine hope panguva iyoyo yekuita iyi yehunyanzvi "hupenyu hushoma" uye vhiri iri rakanzi Dima zvechokwadi kuonekwa munyika. Mune chero kona yepasi, inoonekwa mumotokari yega yega pasi, zvekuti munhu wese anoda kuunza pfungwa yekuchengetedzwa inounzwa nemavhiri aRayone.
Kugadzirwa kwevhiri rekutanga kwakawedzera kuvimba kwedu. Zvakaita kuti tione kubatana kwechikwata chedu uye zvakaita kuti tione kutsunga kwedu. Chero bedzi isu tichigadzira pfungwa dzedu uye tichishanda nesimba, isu zvirokwazvo tichazadzisa zvinangwa zvedu uye kupedzisa kurota kwedu. Kuvimbika uye kwechokwadi, hunyanzvi, kutsungirira, hunyanzvi, uye kurwira zvishoma nezvishoma zvave hupenyu uye nheyo dzebasa idzo munhu wese weDima anoteerera chinyararire. Isu tinoishandisa mune zvese zvigadzirwa zvatinoita, uye muhupenyu hwese nebasa. Zvinhu. Ichi chinodikanwa kune chimwe nechimwe chezvigadzirwa zvedu, uyezve chinodikanwa chedu pachedu. Isu tinotenda kuti rimwe nerimwe mavhiri edu ibasa rakakwana rehunyanzvi, uye isu tinotenda kuti rimwe nerimwe remavhiri edu anomiririra kutsunga kuita fambiro mberi. . Ramba uchienderera mberi mukushandurwa kwemapurojekiti emavhiri nehunyanzvi hwekugadzira zvinhu, uye nekuvaka inozivikanwa pasi rese vhiri hub muindasitiri.
Muna Kurume 2020, Rayone mavhiri Hub's yekutanga kuyambuka muganho e-commerce timu yakagadzwa, zvichiratidza kutsva kutsva kwekambani kweiyo yapfuura isina-based-kushambadzira modhi kune itsva e-commerce kushambadzira modhi. Takatanga yedu yepamhepo uye isingaite mbiri-chiteshi chiratidzo chekambani. Mugore rimwe chetero, takavhura chitoro chedu paAlibaba International Station. Kubva munaNovember, takawana chitoro chenyeredzi shanu. Iyo online transaction vhoriyamu yakasvika 96,6447.5 US madhora. United States, Thailand, Canada, Philippines, Australia nedzimwe nyika vese vane zviitiko, uye kuita kwavo pamhepo kwakawana zvibereko zvakanaka.
Inoratidzika kunge iri kure kwazvo, asi inoita kunge iri muchanza cheruoko. Makore matanhatu apfuura, isu hatina kutarisira kuti tichazokwira kusvika pakureba kwazvino mumakore matanhatu. Izvo zvakawanda zvakaitwa uye kukudzwa kwakawanikwa mumakore matanhatu zvakare zvaireva kuti isu tasvika Iko kune yepamusoro, asi hazvireve kuti isu takagutsikana. Tichaenda kune yakakwira yepamusoro. Ndiko kurota kwega kwega Dima, uye ndizvo zvinoda kuitwa naDima wese -Ipi mota, iripi Rayone.
Post nguva: Nov-02-2020
Mari yezvikamu Jiangxi Rayone Wheels Technology Company Limited